Waajib sir qarrin/(qarsoodi), warbixin sii gudbin iyo warbixin doonnasho - Region Midtjylland
Du er her: Om os English Other languages somali Waajib sir qarrin/(qarsoodi), warbixin sii gudbin iyo warbixin doonnasho
Waajib sir qarrin/(qarsoodi), warbixin sii gudbin iyo warbixin doonnasho
Dhammaan shaqaallaha cisbitaalka waxaa waajib sir qarrin ka saaran yahay xannuunkaagga iyo xaalladdaadda shaqsi ahaanneed.
Sir qarrintu xitaa waa ay ka khuseysaa ehelka. Taas macnaheeddu waa in adigga oo ah ehel sokeeye ah sidda kalliya ee lagguuggu tabin/sheegi karro arimaha caafimaad ee ninkaagga/xaaskaagga ay tahay in qofka xannuunsanni oggollaaddo.
Shaqaallaha caafimaadku waxa ay caaddi ahaan usii ugudbinnayaan warbixintaadda shaqaallaha kalle ee daaweyntaadda sii wadaya ama ka sii shaqeynaya. Warbixinta muhiimka ah waa la sii gudbinnayaa haddii tusaale ahaan lagguu rarrayo ama warreejinnayo qayb kalle
ama cisbitaal kalle.
Warqad ahaan ayaa marlaxaddaadda daaweyn ahaanneed ee uu Cisbitaalku qabtay lagu wargelin doonnaa dhakhtarkaagga.
Qofka asagga ee xaalladdaadda caafimaad loo gudbinnayo adigga ayaa goáanniya iska leh. Adigga ayaanna xaq uleh inaad diiddid in shaqaalluhu ay warbixinta adigga kugu khuseysa usii diraan dad kalle oo ay ka mid noqon karraan ehelka ama masúuliyiinta, tusaalle ahaan noqon karra dhakhtarkaagga caaddigga ah.